Bankoualé Palm Livistona carinensis waa xayiraad ku dhow xayawaanka dabiiciga ah ee loo yaqaan ‘Vulnerable’, oo kaliya oo loo yaqaano in ay ku dhacdo dad yar oo ku nool Jabuuti, Soomaaliya iyo Yemen.
Dadka reer Jabuuti waa in ka yar 400 oo qaan-gaar ah oo ku nool 12-ka degmo ee ugu hooseeya qaybta ugu weyn ee loo qaybiyo ee Goda Mountain. Dadka qaangaarka ah way ka weyn yihiin baaluq, dhallinyaradu iyo geedo ayaa laga helaa meelaha laga ilaaliyo daaqa meelaha ay xayawaanku cuni kari waayaan.
Si kastaba ha noqotee, sababtoo ah kala qaybinta xaddidan ee dalka iyo gobolka, noocyada ayaa la kulma khatarta sare ee ah ee duurka ee mustaqbalka fog iyo iyadoo ku saleysan xogta dhawaan la ururiyey ee timirta.
Waxaa laga yaabaa inay ku habboon tahay in la bedelo xaalada noocyada IUCN ee Tilmaame-yaasha ilaa Endangered.
adnature Dabeecadda, Dhirta Bankuwaale', Dhirta, Kaladuwanaanta abuurka, Nakhli, Tajoorra. Togorri